Ukukhula Okubi kweziNgulube
Izingulube ezikhulayo kancane noma zingabeki isisindo zifaka ithonya elibi ekuzuzeni inzuzo yepulazi, njalo ngosuku olulodwa oludingekile ukuwondla zidla inzuzo yepulazi. Ukukhula okubi kanye nesimo kungase kubhekiswe ezintweni ezihlukahlukene, ezifana nezakhi zofuzo, ukungondleki, izifo eziphazamisayo, izifo kanye nezimo zemvelo.
Ezinye izinhlobo zezingulube zikhula kancane uma zizalwa futhi zikhula ngokushesha kunezinye izinhlobo. Izinsikazi zezinhlobo ezithile nazo ziba nobisi obuningi kanye nezimfanelo zokubeletha ezingcono, okuholela ekubeni izingulube zabo zikhule ngokushesha futhi zibe nempilo. Ngakho-ke bheka ukuthi yini evamile kulolu hlobo uma ubeka izinhloso zokukhula futhi uqhathanise imiphumela yakho yokukhiqiza neyabanye abalimi.
Abalimi abaningi basebenzisa ukubeletha, ngamanye amazwi isifuba esivela kuhlobo olulodwa eqenjini kolunye uhlobo ukuze uthole izimfanelo ezinhle kunazo zonke ezivela kuzo. Uma wenza lokhu, zonke izinzalo kufanele zithengiswe, ngoba ukuzalanisa nenzalo kungaholela kuzo zonke izimfanelo ezimbi zenzalo ezimbili ezikhuliswayo enzalweni yeqembu lesibili.
Uma ukhetha impahla yokukhiqiza, kubalulekile ukhethe izilwane ezikhula kahle futhi zibe nezimfanelo ezinhle zokukhiqiza nezenyama.
Izingulube zingase zikhule kabi ngenxa yokuthi azidli okwanele, ukudla kunomgangatho ompofu, kunzima ukugaya.
Ukuze ugweme le nkinga, cela isazi sezempilo sezilwane noma udokotela ukukusiza ukuthi uhlele uhlelo lokudla oluhlangabezana nazo zonke izidingo zokudla okunomsoco wezingulube zakho ezigabeni ezithile zokukhiqiza. Uhlelo olunjalo akufanele lucabange kuphela izidingo zokudla zezingulube, kodwa futhi lunikeze imithombo etholakala kalula endaweni yakho kanye nezindleko zezinto zokusetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi izingulube zithola ukudla okwanele uma zidinga, kungakhathaliseki ukuthi izingulube zidla ngaphandle noma zikhiqizwa ohlelweni lwezindlu olunzulu. Uma izingulube zikhiqizwa ngaphandle, izingulube kufanele zibe nokutholakala kokungenelela ukuze kudlule ukuntuleka ekudleni. Abalimi kufanele futhi baqinisekise ukuthi ingulube ngayinye inokufinyelela ekudleni ngokunciphisa ukuncintisana ekudleni. Lokhu kungenziwa ngokuqinisekisa ukuthi kukhona isikhala esanele sokondla ingulube ngayinye ekudleni.
Ukudla kufanele kuhlanzeke, ngaphandle kokuveza izingozi zezempilo, izingulube okungenjalo zingenqaba ukudla.
Izibungu zangaphandle, njengamazeze, izintwala nemikhaza, zingabangela ukucasuka okunjalo ukuthi izingulube zichitha isikhathi esiningi zizama ukunciphisa ukucasula ngokukhala kunokudla, okuholela ekukhuleni okubi. Izibungu zangaphakathi komzimba, nazo zizobangela ukukhula okubi.
Ukuhlanzeka endaweni yokukhiqiza kuyohamba ngendlela ende ekunqandeni izibungu. Uma kunokuhlasela okuningi, phatha ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uvimbele ekusakazeni kwezinye izingulube. Kunengqondo ukuphatha izingulube ngokuvimbela uma ingozi ethile iphakeme ngaphansi kwezimo zakho zokukhiqiza. Buza isazi sempilo yesilwane noma udokotela wezilwane ukuthola iseluleko.
Ingulube egulayo noma "ukuzwa ingajabuli" ingase ingabi nomuzwa wokudla. Ngakho zama futhi uvimbele ukuqubuka kwezifo futhi uphathe ngokushesha uma kwenzeka.
Ukucindezeleka okokushisa kunomthelela omubi ekudleni, kanti ukucindezeleka okubandayo kuzoholela izingulube zidle ngaphezu kokuvamile emzamweni wokuzifudumeza. Ngakho-ke, nikeza izingulube ngondla ngezikhathi ezipholile zosuku bese wandisa ukudla kwazo ngamaminerali engeziwe ukuze kungabi nokulahleka okunomsoco ngesikhathi sokushisa.
Imizamo kufanele ithathwe ukuze ivimbele, ikakhulukazi izingulube ezincane, kusukela kubanda kakhulu, njengoba lokho kuzozenza zibesengozi kakhulu ezifweni futhi kubangele ukukhula okuncane.